सफल लगानी विविधताका लागि दिशानिर्देशहरू अर्थव्यवस्था वित्त
लगानी सफलतापूर्वक विविधिकरणका लागि दिशानिर्देशहरू
तपाईको इक्विटी अपरेशन्सको रक्षा गर्न तपाईको एउटा कुञ्जी निस्सन्देह तपाईको लगानीलाई विविधता दिने हो। किनभने प्रभाव मा, तपाईं मात्र सक्षम हुनेछ नाफा बढाउन उही बाट। यदि होईन भने यसले शेयर बजारको लागि सबैभन्दा प्रतिकूल परिदृश्यहरूसँग बस्न मद्दत गर्दछ। जहाँ तपाइँसँग सबैभन्दा ठूलो जोखिम त्यो सबै हो आन्दोलन कि तपाईं त्यो विशिष्ट क्षण मा खोलेको छ। थप रूपमा, यो लागू गर्न एक धेरै सजिलो रणनीति हुनेछ र यो साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूको सबै प्रोफाइलहरूको लागि खुला छ।
किनभने यसको बारेमा यो हो कि तपाईं आफ्नो सबै बचतहरू समान सम्पत्ति वित्तीय सम्पत्तिमा लगानी गर्नुहुन्न। तर यसको विपरित, तपाईले यसलाई लगानीका बिभिन्न प्रकारहरू बीच वितरण गर्नुहुन्छ र किन गर्नुहुन्न विभिन्न वित्तीय उत्पादनहरू बीच। सबैभन्दा पारम्परिक देखि तिनीहरू आफ्नो सञ्चालन मा अधिक जोखिम बोक्ने। तिनीहरूको संयोजनले अबबाट तपाईंलाई धेरै लाभहरू ल्याउन सक्छ। त्यस बिन्दुमा तपाइँ फिर्ती सुधार गर्नुहुनेछ तपाइँ तपाइँको बचतमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो उद्देश्य के हो भने पछि सबै तपाईं शुरू देखि खोज्दै हुनुहुन्छ।
यो लगानी प्रणालीले संकेत गर्ने ठूलो फाइदाहरूमध्ये एउटा यो हो कि यसले तपाईंलाई बिभिन्न समाधानहरू छनौट गर्न अनुमति दिनेछ। तिनीहरू मध्ये केही धेरै परम्परागत छन्, तर तिनीहरू मध्ये केही वास्तविक हुन् र निश्चित रूपमा अभिनव अवस्थामा पनि। त्यसोभए अन्तमा तपाईको पैसाको संसार संगको सम्बन्ध अहिले सम्मको भन्दा बढी सन्तोषजनक छ। तपाईंले केवल थोरै ब्याज राख्नुपर्नेछ र सबै भन्दा धेरै अनुशासनमा तिनीहरूलाई पूर्ण सुधारको साथ बाहिर लैजानुपर्नेछ। सबै निश्चितताका साथ, यो उत्तम नतीजाहरूको लागि लायक हुनेछ जुन तपाईं यी लगानी दृष्टिकोणहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
1 लगानीमा विविधता ल्याउनुहोस्
2 बैंक उत्पादनहरू सदस्यता लिनुहोस्
3 अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्थानहरूमा जानुहोस्
4 एक सक्रिय व्यवस्थापन मोडेल छनौट गर्नुहोस्
5 सबै पैसा लगानी नगर्नुहोस्
लगानीमा विविधता ल्याउनुहोस्
अवश्य पनि यो आवश्यक हुनेछ कि तपाईं जानु भएको लगानीलाई विविधता दिन विभिन्न वित्तीय मोडेलहरू। सफलताको कुञ्जी यो हो कि तपाईं स्थिर आयसँग इक्विटीहरू संयोजन गर्न सक्नुहुनेछ, वैकल्पिक ढाँचाको साथ पनि प्रारम्भिक रूपमा तपाईंको मौद्रिक पूंजीलाई बचाउनको लागि सबैभन्दा उपयुक्त सूत्रको रूपमा। तपाईंसँग धेरै प्रकारहरू छन्, वित्तीय संस्था द्वारा बनाइएका डिजाइनहरू। जहाँ तपाई केवल एक मात्र खोज र पत्ता लगाउन को लागी छ कि एक खुदरा लगानीकर्ता को रूप मा तपाइँको शर्तहरु को लागी सबसे उपयुक्त।
वित्तीय बजार द्वारा प्रस्ताव गरिएको सबैभन्दा प्रभावकारी समाधान मध्ये एक आउँदछ लगानी कोष। किनकि यो त्यस्तो उत्पादन हो जुन कुनै वित्तीय सम्पत्तिलाई समान मोडलमा मिलाउन अनुमति दिन्छ। फाइदाको साथ कि तपाईंसँग छनौट गर्न धेरै रकमहरू छन् र जुन यो विशेषता प्रस्तुत गर्दछ। यी सक्रिय व्यवस्थापन मोडेलहरू हुन् जुन संस्थाले विकसित गरेको हो यो विशेष विशेष लगानीको डिजाइनको आरोपमा। युरो बाहेक अन्य मुद्राबाट पनि अनुबन्धित: डलर, फ्र्यांक वा जापानी येन।
विभिन्न वित्तीय सम्पत्तिहरू मिलाउने लगानी कोषहरू लगानी विविधीकरणका लागि लाभहरूको श्रृंखला लिन्छ। ती मध्ये, कि तपाईको घाटा वित्तीय बजार को लागी कम से कम अनुकूल परिदृश्यहरु मा कम हुनेछ। ताकि यस तरिकाले तपाईं सबै सम्भावित परिदृश्यहरूमा राम्रोसँग कार्य गर्न सक्नुहुनेछ। यस प्रवृत्तिलाई राम्रोसँग कब्जा गर्ने मोडेलमध्ये एक मिश्रित लगानी कोष हो। तिनीहरू सबै प्रकारको आम्दानीलाई जोड्दछन्, कुनै पनि प्रकारको वित्तीय प्रस्ताव छोडे बिना। सबै परिप्रेक्ष्यबाट: आक्रामक, रक्षात्मक वा मध्यवर्ती।
बैंक उत्पादनहरू सदस्यता लिनुहोस्
तपाइँको बचतलाई विविधीकरण गर्ने अन्य रणनीतिहरू भनेको बै banking्कि products उत्पादनहरूलाई शुद्ध लगानीबाट टाढा अनुबंध गर्नु हो। समय निक्षेपहरू, बैंक प्रोमिसरी नोटहरू वा उच्च-आय खाताहरू तिनीहरू मध्ये केही हुनेछन्। यस बचत मोडलको पहिलो योगदान व्युत्पन्न हुन्छ कि यसले तपाईंलाई प्रत्येक वर्ष निश्चित र ग्यारेन्टी फिर्ताको साथ प्रदान गर्दछ। तपाईंको पारिश्रमिक ज्यादै उच्च हुनेछैन, तर कम्तिमा तपाईंले कुनै पनि झरनामा पैसा गुमाउनु हुने छैन। तिनीहरू रूचि हुन् जुन विरलै 2% स्तरहरू भन्दा बढी हुन्छ। यो एक धेरै कंजर्भेटिभ रणनीति हुनेछ, तर कुनै पनि केसमा यसले तपाईंको पोर्टफोलियोमा धेरै स्थिरता ल्याउनेछ। विशेष गरी जब वित्तीय बजारले धेरै अनिश्चितता देखाउँदछ।
तपाइँको बचत को एक हिस्सा यी बैंकिंग उत्पादनहरु लाई संचालन विविधीकरण गर्न छुट दिन सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, तिनीहरू भाँडो गर्न धेरै सरल बचत मोडलहरू हुन् जुन तपाईंको पक्षमा विशेष ज्ञानको आवश्यक पर्दैन। यद्यपि प्राय जसो केसहरूमा तपाईले तिनीहरूको म्याद समाप्त हुने समयको लागि पर्खनु पर्नेछ ता कि बेनिफिटहरू तपाईको जाँच खातामा जानुहोस्। पूर्ण आश्वासनको साथ तपाईंको बचतमा तपाईंको ग्यारेन्टी वापसी हुनेछ। अचम्म मान्नु पर्दैन, ती उत्पादनहरू हुन् जहाँ तपाईंको आमा बुबा वा हजुरबा हजुरआमाको पैसा यो लाभदायक बनाउन निर्देशित थियो।
यी उत्पादनहरू सबै घरहरूका लागि धेरै सस्तो हुन्छन्। किनभने तिनीहरू धेरै थोरै पैसाबाट काममा लिन सकिन्छ। बानी १,००० युरोको वित्तीय योगदानबाट। स्थायित्व को विभिन्न अवधि संग तपाईंको वास्तविक आवश्यकताहरु मा निर्भर गर्दछ कि पल देखि खर्च कवर गर्न। यद्यपि तपाईसँग समस्या छ कि तपाईं उनीहरूलाई अग्रिम रद्द गर्न सक्षम हुनुहुने छैन, किनकी बैंकहरूले पनि यस विशेषताको एक कमीशन लागू गर्न सक्दछ जुन करिब २% छ।
अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्थानहरूमा जानुहोस्
तपाईको बचतलाई विविधीकरण गर्नका लागि अर्को कुञ्जी आफैलाई केवल राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा सीमित नगरी आधारित छ। तपाईको चेकिंग ब्यालेन्स बढाउन अन्य ट्रेडिंग फ्लोरहरूको लागि तपाई पुशको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। किनभने वास्तवमा, यस तरिकाले तपाईं नयाँ व्यापार अवसरहरू खोल्नको लागि राम्रो स्थितिमा हुनेछन् जुन अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अन्य गन्तव्यहरूमा छन्। इक्विटीबाट मात्र होइन, निश्चित आयबाट पनि। तर सबै भन्दा माथि वैकल्पिक लगानी मोडेलहरू: कच्चा माल, बहुमूल्य धातुहरू, आदि।
यो धेरै खास रणनीति को प्रभाव मा एक तपाईं आफ्नो पैसा को लागी अधिक गन्तव्य पुग्न सक्षम हुनु हुनेछ। र उनीहरूको नतिजाको रूपमा, तपाईंको लगानी सुधार गर्ने सम्भावनाहरू लगानीका अन्य प्रकारहरूको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेछ। यो पनि सत्य हो तपाईंले अधिक जोखिम लिन पर्ने छ, तर यो टोल हो तपाईंले पैसाको संसारसँग सम्बन्धित आफ्नो दावीहरूमा बढी महत्त्वाकांक्षी हुन भुक्तान गर्नुपर्नेछ। वित्तीय बजारमा पुग्नको लागि कि केहि बर्ष सम्म पूर्णरूपमा पहुँचयोग्य थिएन। ठीक छ, अब तपाईं यो वैकल्पिक मोडेल को लागी अप्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको संयुक्त राज्य अमेरिकाको इक्विटीमा यो इच्छालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सब भन्दा राम्रो बजार छ। टेक्नोलोजी बजारमा जाने विकल्पको साथ जहाँ यस व्यवसाय क्षेत्रमा सबै भन्दा राम्रो कम्पनीहरू समावेश छन्। वा एशियाई बजारहरू पनि जब उनीहरूको अवस्थाले यसको माग गर्दछ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा केही क्षणहरूको लागि धेरै फाइदाजनक विकल्प हो। त्यसबद्दमा तपाइँ समय समयमा लगानी पोर्टफोलियो नवीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको आय कथनमा वृद्धि अपेक्षाहरू बढाउन।
एक सक्रिय व्यवस्थापन मोडेल छनौट गर्नुहोस्
कुनै श doubt्का बिना, यो प्रदर्शन तपाईं अब देखि एक भन्दा बढी आनन्द दिन्छ। तपाईले प्राप्त गर्नु भएको लक्ष्य के हो? ठीक छ, केहि साधारण को रूप मा केहि सम्भव परिदृश्यहरु लाई अनुकूलन को रूप मा तपाईको व्यक्तिगत चासो को लागी कम से कम लाभदायक को लागी। लगानी कोषहरू ती हुन् जसले यो रणनीतिलाई उत्तम रूपमा लिन्छन्। कहाँ प्रबन्धकहरू आफैं वित्तीय सम्पत्ति अद्यावधिक गर्ने जिम्मामा छन् बजार सर्तमा निर्भर गर्दै। लगानी पोर्टफोलियोको आवधिक समीक्षाको साथ। लगानीमा प्रतिफल बढाउनको लागि एक मात्र सूत्रको रूपमा।
कुनै पनि समय, स्थिर वा भेरिएबल आय प्रमोट गर्न सकिन्छ, प्रत्येक अवसर मा सबै भन्दा राम्रो व्यापार अवसर छनौट गरेर। पनि सम्भावना संग युरो स्थिति हेजिंग। मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको मूल्यको परिणामको रूपमा अनावश्यक आन्दोलनहरू जोगिन। जे भए पनि, यो एक मोडेल हो जुन लगानीकर्ताहरूको बढ्दो संख्याले रोजिरहेका छन्। कोष प्रबन्धकहरु यी संचालनहरु को संचालन मा छन्। तपाईंले केहि पनि गर्नुपर्दैन, किनकि तिनीहरूलाई सक्रिय लगानी कोषहरू भनिन्छ।
सबै पैसा लगानी नगर्नुहोस्
विविधता पनि तपाइँको बचतको एक धेरै महत्त्वपूर्ण अंशको साथ विकसित आपरेशनहरू द्वारा समर्थित हुनुपर्दछ, तर तपाइँको जाँच खातामा केही तरलता छोड्दै। सबै भन्दा पहिले, को लागि आफ्नो स्थिति रक्षा गर्नुहोस् वित्तीय बजार मा एक प्रतिकूल प्रवृत्ति को सामना मा। तर पनि आउने महिनाहरूमा देखा पर्ने व्यापार अवसरहरूको फाइदा लिनको लागि स्थितिमा हुन। यो मामला हुनको लागि तपाईसँग अपरेशन्स बढाउन केही बारो छोडेर जानु हुँदैन।
तपाईको लगानीको प्रतिशत एक हुनु पर्छ जुन तपाईले प्रस्तुत गर्नुभएको लगानीकर्ता प्रोफाइलसँग मिल्दो छ। यो आक्रामक सेभरमा समान हुँदैन अर्को स्पष्ट प्रतिरक्षाको तुलनामा। तपाईंले आफैलाई सोध्नु पर्छ कि यो के हो खर्चको स्तर जुन तपाइँले अर्को महिनाहरूमा सामना गर्नुपर्नेछ। लगानीमा नराम्रो आपरेशनहरू गर्ने प्रलोभनमा नपर्नको उद्देश्यका साथ। तपाईंको मौद्रिक खर्चलाई कभर गर्नको लागि केही तरलता फेला पार्न तपाईंको आवश्यकताबाट व्युत्पन्न।
यो पनि अत्यधिक सिफारिश गरिनेछ बिभिन्न वित्तीय उत्पादनहरु बीच आनुपातिक बचत आफ्नो वितरण गर्नुहोस् छनौट गरियो। स्तरहरू अन्तर्गत जुन तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत रुचिहरूको रक्षा गर्न सब भन्दा उपयुक्त ठान्नुहुन्छ। जहाँ तपाइँको योगदान को कम्तिमा अंश उत्पादनहरु मा जान्छ कि जोखिम को उच्च स्तर ले। न्यूनतम अंशको साथ यो माग पूरा गर्नका लागि पर्याप्त हुनेछ। किनभने यो जहाँ तपाईं अधिक पैसा गुमाउन सक्नुहुनेछ यदि लगानी सुरुबाट सिर्जना गरिएको अपेक्षाहरू पूरा गर्दैन।
ठिक छ, यदि तपाईंले यी केही सुझावहरू सुन्नुभयो भने, श invest्का नमान्नुहोस् जुन तपाईंको लगानी अहिलेबाट अझ राम्रो हुँदै जान्छ। संग उत्पादन बढ्ने बढी संभावना। यदि पर्याप्त छैन भने, हो कम्तिमा ताकि तपाइँ यसलाई तपाइँको बचत खाताको ब्यालेन्समा अधिक स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस विन्दुमा जुन तपाईं अनौंठो व्यक्तिगत स्वासको लागि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बोल्सा » लगानी सफलतापूर्वक विविधिकरणका लागि दिशानिर्देशहरू
एडुआर्डो अर्नेस्टो गाराए भन्यो
मानौं अर्जेन्टिनामा मा आतंक मा। निश्चित अवधिमा 49%% वार्षिक दर छ। -०-दिन निक्षेपले त्यो भाँडा दिन्छ, month.२30% प्रति महिना। रकम नविकरणको रकम जम्मा गर्ने मासिक ब्याजको मोटा गणना गरेमा १२ महिनामा 4.28 65.35..12% दिन्छ। प्रश्न यो हुनेछ, यदि यस बैंकि product उत्पादनमा धेरै ठूलो जनसंख्या राखियो भने राष्ट्रिय पैसाको नाफाको पहाड कसरी टिकाउन सकिन्छ? थप रूपमा यसले लगानीको परम्परागत स्तरमा निक्षेपको मूल्य मात्र राख्नेछ किनकि अर्जेन्टिना पैसाको अवमूल्यन market 58 देखि 64 49% सम्म हुने छ जुन आन्तरिक बजारमा बेचेको सामानको आधिकारिक मुद्रास्फीति र inflation to देखि 54 XNUMX% को आधिकारिक मुद्रास्फीति हुनेछ। बार्षिक
एडुआर्डो अर्नेस्टो गारालाई जवाफ दिनुहोस्
सुन राम्रो पूर्वानुमानको साथ यसको अधिकतम स्तरमा पुग्छ
पैसाको कानुनी ब्याज के हो?